macOS Sierra 10.12.4 ukara, Apple suppliers, CarPlay gam akporo Auto tụnyere na ọtụtụ ndị ọzọ. Kacha mma n'izu na m si Mac | Esi m mac
Anyị abanyelarị n’izu ikpeazụ nke ọnwa Machị na ọ bụ na oge na-aga ngwa ngwa. A urua anyị hụrụ ọtụtụ na-akpali ozi ọma banyere ụwa nke Apple na Mac ke ofụri ofụri, nke bụ eziokwu bụ na mbata nke nsụgharị ọhụrụ nke macOS, iOS, tvOS na watchOS, Ọ bụrịrị ezigbo akụkọ mgbe ọtụtụ ụdị beta gachara. N'ọnọdụ ọ bụla anyị nwere ọtụtụ akụkọ ọzọ n'izu a na taa Sọnde, ọ bụrụ na udo dị jụụ, anyị ga-ahụ ụfọdụ n'ime ndị kachasị mma.
Nke mbụ bụ na ụdị ọhụrụ nke MacOS Sierra 10.12.4 ọ dị ugbu a maka ndị ọrụ niile. Yabụ ọ bụrụ na imelitebeghị Mac gị dịka nke taa, ịnwere ike. Na mbipute a Nhọrọ Mgbanwe abalị gbakwunyere na ndozi ndị ọzọ.
Akụkọ ndị a metụtara Apple mgbere. Nke a na ụdị ozi ọma bụ n'ezie na-akpali mara nkọwa na nke nkiti iwu na-enwe ike na-arụ ọrụ na Apple na na-ekwe nkwa ogo ndị ọrụ a yana nke ngwaahịa ha rụpụtara.
Ugbu a, anyị na-eji obere aghụghọ gaa dee akwụkwọ ozi na-adịghị ahụkebe na ụda olu na Mac ngwa ngwa. N'okwu a ọ ga - ekwe omume na ọtụtụ n'ime gị amaola ya, mana ọ dị mma ịkọrọ ya ndị niile ndị ọrụ ọhụụ amaghị maka ịdị adị ya.
Onye mmeputa f.lux Na-ekwu, macOS 10.12.4's Night Shift feature adịghị arụ ọrụ dị ka ngwa ya. Anyị doro anya na ha abụọ na-arụ ọrụ nke ọma, mana anyị na-eme ya gosipụta na onye ọ bụla na-agbachitere nke ya.
Anyị na-ejedebe ihe ọchị yana vidiyo na-arụpụta ihe na ntanye n'etiti Apple CarPlay na gam akporo Auto. N'ezie ma sistemụ nọ ugbu a na usoro nke imeziwanye, ma ọ na-achọsi ike iji tụnyere ma hụ ọrụ nke otu na nke ọzọ na vidiyo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » macOS Sierra 10.12.4 ukara, Apple suppliers, CarPlay gam akporo Auto tụnyere na ọtụtụ ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
Live Bright, ihe ọhụrụ Apple vidiyo iji kpalie anyị na Apple Watch